Umboniso oKhokelwayo, umqondiso weLed, imiqondiso yedijithali- iYonwaytech
I-Shenzhen Yonwaytech Co., Limited ngumenzi womboniso we-LED osekwe kwi-Shenzhen PRC.
Imveliso ibandakanya isikrini sangaphandle se-LED, ukuBonisa okungaphakathi kwe-LED, iNgcono yePixel Pitch HD Isikrini se-LED, iScreen se-LED yokuQeshisa ngeSiteji kunye nokuBonisa okungaphandle kwe-LED.
Sikholelwa kukuqhelaniswa nabathengi, iYonwaytech ihlala ibandakanyeka ekunikezeleni ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu ngomsebenzi wethu.
Zonke ziPlagi enye yoRhwebo kunye nokudlala iPowusta ye-LED
Iplagi yokusebenza elula kunye nenkqubo yokudlala emiselweyo ngaphakathi, akukho PC ifunwayo, ukonga iindleko ngakumbi kunye nokulula. Ubunzima bokukhanya obukhulu kunye neslim emiselweyo nge-pixel 1.8mm / 2.0mm /2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm kwi-80 "ububanzi 640mm × ukuphakama 1920mm.
Ibala elijikelezayo leMiboniso ye-LED
Ubunzima bokukhanya okukhulu, ukusebenza ngokulula ngokutshixa okukhawulezayo kunye nezihlanganisi zofakelo olusisigxina okanye oluxhonyiweyo. Isiciko semodyuli esikhokelwayo sePolymer kunye nekhwalithi ephezulu yekhabhinethi yekotoni ukukhusela ukulimala ngexesha lomdlalo. Ikhabhinethi ye-Magnesium ye-alloy enokutshatyalaliswa kobushushu kunye nesakhiwo esomeleleyo. Ubungqina be-IP65 kunye ne-3840hz yokuhlaziya inqanaba elifanelekileyo lokusetyenziswa kwebala lezemidlalo kunye nerekhodi yevidiyo.
Ukudibana okuDibeneyo kuMgangatho weTayile ye-LED.
Umgangatho wethayile okrelekrele obonisiweyo, odityanisiweyo kunye nokukhawulezisa ukuqhuba kwe-IC ngaphakathi kwe-0.02 millisecond. Isakhiwo sekhabhathi esomeleleyo nesomeleleyo, silayisha iitoni ezi-2 zokwenene kwimitha nganye nganye. I-IP65 engenamanzi, engenalo uthuli, isiliphu sokulwa kunye nokukrwela. Isetyenziswa gwenxa kwii-disco, kwii-pubs, kwi-T-nqanaba, kwiikonsathi nakwiidrama. imicimbi kunye nofakelo olusisigxina. Ilungele ukusetyenziswa kwexesha elifutshane kwimiboniso, kwimoto, kwimiboniso yefashoni nakwimiboniso yeTV.
Iindidi ezahlukeneyo zoMboniso weModyuli ye-LED
Ngaphandle P2.5, DIP P10 P16, Indoor Soft Flexible. Imodyuli ethembekileyo ethembekileyo yokusetyenziswa kwangaphakathi nangaphandle, uluhlu olubanzi lwe-pixel yokukhetha.
IBALA LE-ARENA LEMIDLALO YEXESHA LOKUBONISA I-LED
Yakho enokuthenjwa One-stop LED Bonisa yoMvelisi kunye kumazwe.
INkonzo ekwi-Intanethi kunye neNkxaso
I-7 × i-24 iiyure zonxibelelwano kwangoko, impendulo ekhawulezileyo, isindululo seprojekthi yasimahla, inkonzo yokunika ingxelo ngemveliso esondeleyo, inkqubo efanelekileyo yokuhanjiswa kwezinto, ukuhanjiswa ngokukhawuleza.
Umgangatho ophezulu Ngexabiso elifanelekileyo
Sigcina ixabiso elifanelekileyo kunye nomgangatho onokuthenjwa. Ungaze wenze idini kumgangatho, sihamba kuphela neempawu eziphambili zezinto. Sigcina ubuhlakani obomeleleyo kunye neNatiosnstar, Kinglight, MarcoBIock, Meanwell ukuqinisekisa iimveliso zethu zisebenzisa itekhnoloji ephezulu yokuphela kwimarike
Amava ama-13 + eminyaka kwi-LED
Iqela lethu elomeleleyo elinobuchule obugqwesileyo ekuyileni nasekuveliseni izinto ngoomatshini nakwizinto zombane. Siyayixabisa intembeko yomthengi ngamnye kwaye senza ukuba izimvo zabo zizaliseke. Amava eminyaka eli-13 + kwisiboniso esikhokelwayo, sivelisa kwaye sithumele ukuthembela ezandleni zakho.
Uluhlu olubanzi lweMveliso yokuBonisa ye-LED ngokuzithandela
Senza uluhlu olupheleleyo lweemiboniso ze-LED, ngaphakathi nangaphandle, irente, i-pixel encinci, usetyenziso kwiimarike ze-DOOH, imiboniso, amanqanaba eminyhadala, inkomfa, izibhedlele ezithengisa izinto kwakhona, izitishi zeTV, iikonsathi, iicawa njalo njalo. Inkonzo yokubonisa ekhokelwayo eyenziwe ngokwezifiso iyafumaneka kwiYONWAYTECH
Ulawulo loMgangatho oQhelekileyo ngeSikrini sethu se-LED
Ngomoya wentembeko, intlonipho, ukugqwesa kunye novelwano, iYonwaytech yakha kwaye igcina ukuthembana okunzulu kunye nabathengi bethu, abathengisi, kunye neqela lethu. Sisoloko sizibandakanya ekunikezeleni ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu ngomsebenzi wethu kubo bonke abathengi bethu kumazwekazi ama-6, siya kuhlala sikhula ngokuzinzileyo ukuze sikukhonze ngcono.
Lithini inqanaba loBungqina be-IP? Ithetha ntoni kumboniso okhokelwayo?
Wonke umboniso okhokelwayo uyazi ukuba umboniso okhokelwa ngaphandle kufuneka ubenenqanaba elifanelekileyo lobungqina be-IP ukuqinisekisa umgangatho olungileyo. Iinjineli zeR & D zeYONWAYTECH isibonakaliso se-LED ngoku ngoku sihlengahlengisa ulwazi lwe-LED yokubonisa ukungangeni manzi kuwe. Ngokubanzi, inqanaba lokhuseleko lesiboniso se-LED yi-IP XY. Ye ...
I-LED "kukuKhanya okuKhanya ngokuKhanya", eyona yunithi incinci yi-8.5 intshi, inokugcina ipikseli kunye nokutshintsha kwemodyuli yeyunithi, ixesha lokuphila kwe-LED ngaphezulu kweeyure eziyi-100,000. I-DLP "yinkqubo yokuKhanya kweDigital" ubungakanani malunga ne-50inch ~ 100inch, ixesha lobomi malunga neeyure ezingama-8000. kufuneka ubuyisele kwindawo ethengisa yonke into ukuba iprojekhthi yebhalbhu kunye nepaneli ...
Iindlela zolondolozo zomboniso okhokelwayo zahlulahlulwe kakhulu kulondolozo lwangaphambili kunye nolondolozo lwasemva. Ulondolozo lwasemva olusetyenziselwa izikrini ze-LED zokwakha iindonga zangaphandle, kufuneka ziyilelwe ngasemva ngasemva ukuze umntu enze ulondolozo kunye nokulungisa ngasemva kwesikrini ...